Ubumfihlo bekhompyutha kanye neSoftware yamahhala: Ukwenza ngcono ukuphepha kwethu | Kusuka kuLinux
Ubumfihlo bekhompyutha kanye neSoftware yamahhala: Ukwenza ngcono ukuphepha kwethu
La «Seguridad de la Información», le ndawo entsha yolwazi lomuntu, namuhla ihlala ihlobene cishe nazo zonke izici zokuphila kwansuku zonke emphakathini wanamuhla. Ngakho-ke, ishiye inkambu yobuchwepheshe eqinile futhi isihlanganisiwe nomkhakha wezenhlalo.
Futhi manje, lobo buchwepheshe busongela umphakathi, umuntu ngamunye noma iqembu, umphakathi nabangasese, la «Seguridad de la Información» imizamo yokunikeza izindlela ezisebenzayo noma izinyathelo, ngokusebenzisa «Seguridad Informática», la «Ciberseguridad» noma i «Informática Forense» ngaphakathi kwezinhlelo zezinqubomgomo zomphakathi ze-States kanye neNhlangano jikelele. Ukuze uzame ukuqinisekisa ngangokunokwenzeka i «Seguridad», lo «Privacidad» futhi i «Anonimato» wawo wonke amalungu eNhlangano.
Konke lokhu, ngoba ukukhula okunamandla nokwandayo kobuchwepheshe kuvame ukweqa imithethonqubo kazwelonke neyezwe., okukhona nokuhleliwe, ukuvikela yonke imisebenzi yabantu, ethintekayo noma engathinteka noma ingalingani ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe.
1 Ilungelo lemfihlo
1.2.1 Ilungelo lokuvikelwa Kwemininingwane yomuntu siqu
2 Kuyini ubumfihlo bekhompyutha?
3 Ubumfihlo nokungaziwa
4 Ubumfihlo bekhompyutha kanye neSoftware yamahhala
4.1 Inkululeko Yamahhala Yesoftware
4.2 Izinzuzo zeSoftware yamahhala
Igebe elenziwe ubuchwepheshe livame ukwandisa izinsongo nobungozi be- «Sociedad» uma kunjalo, ayilawulwa kahle kusukela ekuqaleni, ikakhulukazi endaweni yomthetho we «Privacidad». Umthetho wendawo yonke okhona ku- «Organización de las Naciones Unidas (ONU)», futhi lokho kuqukethe «Declaración Universal de los Derechos Humanos» zonyaka we-1948, ngale ndlela elandelayo:
“Akekho umuntu oyophazanyiswa ngokungenasizathu ngempilo yakhe yangasese, umndeni wakhe, ikhaya lakhe noma izincwadi zakhe, noma ukuhlaselwa ukuhlonishwa noma isithunzi sakhe. Wonke umuntu unelungelo lokuvikelwa komthetho ekuphazamisweni noma ekuhlaselweni okunjalo ”.
Ilungelo lokuya ku- «Privacidad», eyaqinisekiswa kamuva ngo-1966, ngu «Asamblea General de Naciones Unidas», ku-Article 17 ye «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»». Futhi-ke, kwezinye izikhathi eziningi izinhlangano nezikhungo ezahlukahlukene zomhlaba wonke zokulwa nokuhlangenwe nakho okuhlaselayo okwalandela empilweni yomuntu obekuphilwa kusukela «Primera Guerra Mundial» ne «Nazismo», the «Fascismo» noma i «Macarthismo», nezinye eziningi kuze kube namuhla.
Njengomphumela wakho konke lokhu, kokubili kufayela le- «ONU» njengakwezinye izinhlangano noma ezimweni, zisungulwe kuze kube manje, zombili ezikhulu nezincane, iqoqo lezakhiwo zomhlaba ezingenamngcele ukuvikela indawo okungeyona yomphakathi kanye nokuthi imingcele uMbuso kanye noHulumeni kumele bayibeke futhi bayihloniphe maqondana nokuphazamiseka kwempilo yezakhamuzi.
Kepha, futhi manje njengoba lonke iqiniso elingokomzimba, lihlangana ne «realidad digital» o «cibernética»: Ngabe le migomo yezomthetho ingakhishelwa ngaphandle kusuka kokusemhlabeni kuya emhlabeni obonakalayo? Umzamo omuhle maqondana nalokhu ubuyisimo sezinyathelo ezitholwe ngokusebenzisa i- «Resolución 45/95» we «Asamblea General de Naciones Unidas» ngoDisemba 14, 1990, ukusungula imihlahlandlela yokulawulwa kwe- «archivos de datos personales informatizados».
Ilungelo lokuvikelwa Kwemininingwane yomuntu siqu
Izinyathelo, lapho izinqubo zasungulwa khona ukuze zisebenzise imithetho ephathelene ne- «archivos de datos personales informatizados», nekusetjentiswa kwemtsetfo lofanele kushiyelwe emandleni eMibuso, uma nje «Derecho a la protección de los Datos Personales», uma kubhekwa izingozi nokuhlukumezeka okungenzeka ukuthi abantu bachayeka enqubweni eyanda ngokwandayo yokusebenzisa i-computer.
Phakathi kwamanye amacala abalulekile okufanele siwacacise, yiyona «Informe del Consejo de Derechos Humanos (A/72/53)», lapho kucaciswa khona ukuthi ijubane lentuthuko yezobuchwepheshe evumela abantu ukuthi basebenzise i- «TIC», ngasikhathi sinye, kwandisa futhi kusiza amandla oHulumeni, Izinkampani kanye nabantu ukwenza imisebenzi ye «vigilancia, interceptación y recopilación de datos».
Ngakho-ke, inxusa ohulumeni ukuthi bagweme izenzo eziholela ekwephulweni noma ekwephulweni kwamalungelo abantu, ikakhulukazi ilungelo lenkululeko. «Privacidad», esungulwe ku- Isigaba 12 se-Universal Declaration of Human Rights futhi ku I-Athikili 17 Yesivumelwano Samazwe Ngamazwe Samalungelo Abantu Nezombusazwe.
Kuyini ubumfihlo bekhompyutha?
Igatsha le- «Seguridad de la Información» efunda konke okuphathelene nobumfihlo noma ukuvikelwa kwedatha. Ukuqondwa yilokhu, okungukuthi, ubumfihlo noma ukuvikelwa kwedatha njengesici se- «Tecnología de la Información (TI)» ephathelene namandla lapho inhlangano noma umuntu ngamunye anqume ukuthi iyiphi idatha kuhlelo lwekhompiyutha engabiwa nabantu besithathu.
Ngamanye amagama, kungashiwo ngendlela emfushane, ukuthi Kuyilungelo lomuntu othile (noma okuthile) ukugcina imininingwane yakhe yedijithali igcinwe noma iyimfihlo ngaphakathi kwengqalasizinda yabo yezinsiza kusebenza nokuxhumana ezisetshenzisiwe. Ukuqondwa, ngemininingwane yomuntu siqu, noma yiluphi ulwazi mayelana "nomuntu ophilayo okhonjiwe futhi obonakalayo", njengoba kuchazwe yiKhomishini yaseYurophu ku Umthethonqubo Wokuvikelwa Kwemininingwane Jikelele (RGPD).
Lawa magama ajwayele ukudideka, ngakho-ke kufanelekile ukucacisa futhi ukuthi yize womabili engabonakala efana, awafani.
Ngenkathi, la «Privacidad» ukulindelwa komuntu ngamunye kokulawula umuntu ngamunye anakho phezu kolwazi olumayelana naye kanye nendlela lolu lwazi olwaziwa noma olusetshenziswa ngayo ngabantu besithathu, i «Anonimato» impahla noma isici esihlotshaniswa ne- «Sujeto» okuveza ukuthi ayikwazi ukukhonjwa ngaphakathi kweqoqo lamanye amabhizinisi (izifundo), evame ukubizwa «Conjunto anónimo», futhi imvamisa yakhiwa ngazo zonke izihloko ezingadala isenzo (noma ezihlobene).
Futhi ngenkathi, i- «Privacidad» kukodwa kuhlobene kakhulu nesibopho somsebenzisi lapho abelana ngokuqukethwe kwakhe kwi-Intanethi, i- «Anonimato» kuhlotshaniswa eduze nezenzo zomsebenzisi ukuqinisekisa ukuthi ukufinyelela kwabo kwiNethiwekhi kwenziwa ngendlela yokuthi ubunikazi babo neminye imininingwane ehlobene ayaziwa.
Ubumfihlo bekhompyutha kanye neSoftware yamahhala
Kusobala, ukukhathazeka okukhona emhlabeni jikelele ukuvikela ilungelo loku «Privacidad» futhi i «Seguridad de la Información» ngokusebenzisa imizamo yomthetho ezinekhono lokuhlala phambili kwezobuchwepheshe uqobo.
Ngaphezu kokungezwani okujwayelekile kwendiza yomthetho, izikhundla ezisesikweni sobuchwepheshe esifanele kunazo zonke ukulwa nezingozi abasebenzisi abadalulwa kuzo lapho benikana ulwazi okwamanje zikhona futhi ziyimpikiswano, ngokuhlukaniswa okucacile phakathi kobuchwepheshe obukhululekile nobokuphathelene. Ezingeni «Seguridad de la Información», the «Tecnologías libres» Kade bethola indawo, beqaqa izinkolelo zendabuko ezikhombisa ukuthi ukuze okuthile kuthathwe njengokuphephile kumele kube yimfihlo futhi kungatholakali.
Inkululeko Yamahhala Yesoftware
Izinkululeko ezine ezibalulekile zobuchwepheshe bamahhala yilezi:
0: Inkululeko yokuqhuba uhlelo njengoba ufisa, nganoma iyiphi injongo.
1: Inkululeko yokungena nokutadisha uhlelo, futhi ulushintshe noma ulushintshe ukuze kuzuze wena.
2: Inkululeko yokwabelana noma yokusabalalisa kabusha amakhophi ukusabalalisa okufanayo kanye / noma ukusiza abanye.
3: Inkululeko yokusabalalisa amakhophi wezinguqulo zakho eziguquliwe kubantu besithathu.
Isikimu esingelula kuphela, kepha futhi esivumela ukuqinisekisa izinsika ze- «Seguridad de la Información», okungukuthi, imfihlo, ubuqotho, ukutholakala, kanye ne- «Seguridad Informática» futhi i «Privacidad Informática», njengoba kuxoxwe ekuqaleni kwalesi sihloko Ukuphepha kwe-cyber, lapho kwathiwa:
“… Ngiyabonga «cuatro (4) leyes básicas del Software Libre» ezivumela izimpendulo ukuthi zingasebenzi kahle futhi zisebenze kuphela, kepha futhi zinamandla, zihlukahlukene futhi zinokuqondiswa okuthile. Noma kunjalo, ngaphandle kwe- kusolwa ukwahlukana okukhulu i-del «Software Libre, Código Abierto y Linux»".
Izinzuzo zeSoftware yamahhala
Ekugcineni, singangeza lokho ezingeni le- «Privacidad», isoftware yamahhala isinikeza iziqinisekiso ezinkulu kulokhu, ngoba singayicwaninga ikhodi, futhi sazi ngokuqinisekile ukuthi yenzani ngaphakathi ngokujwayelekile, noma sazi ukuthi inqubo ye-X yenzani ngolwazi lwethu. Futhi size sikwazi ukuthola, umnyango ongemuva ongase uhlungwe ngemininingwane ethile yomuntu siqu ngathi noma umsebenzisi, ngenkathi ikusoftware ephathelene, akukho kulokhu kulula ukwenza.
Njengokuthi, besibona, la «Privacidad» Akuyona noma yini, kuyi- «Derecho Humano fundamental» lokho kumele kuqinisekiswe ngokwethembeka ngohulumeni, izifundazwe, izinkampani, nabanye abantu noma izinhlangano.
Ngendlela yokuthi imigomo eminingi yendawo yonke igcwaliswe, njenge Umgomo Wokugcina Umthetho Nokuthembeka Kwesivumelwano SeZizwe Ezihlangene okubeka ukuthi imininingwane ephathelene nabantu akufanele iqoqwe noma icutshungulwe ngezinqubo ezingafanele noma ezingekho emthethweni, noma isetshenziselwe izinhloso eziphikisana nezinhloso nemigomo yoMqulu.
Okokugcina kodwa okuhle ukukugcina ukukhumbula lokho Ihhovisi likaKhomishani oPhakeme Wamalungelo Abantu weZizwe Ezihlangene libheka ilungelo lethu lobumfihlo esikhathini sobudijithali.
Futhi kuphethe ukukhulisa ngaphambi kwe- «Naciones Unidas» imibiko ehambisanayo yobumfihlo enkathini yedijithali, ukuze kuqondiswe indlela amaqembu e-United States okufanele ayithathe ngokomthetho, uma kubhekwa ukuthi ubugebengu obungenziwa ngokumelene nelungelo lobumfihlo, esikhathini sedijithali, futhi buzoqhubeka nokuguquka njengobuchwepheshe uqobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Ubumfihlo bekhompyutha kanye neSoftware yamahhala: Ukwenza ngcono ukuphepha kwethu
I-athikili ethakazelisa kakhulu ephuzwini lokuthi yize ibucayi ayinakwa ngenxa yokusebenza kwazo zonke izindleko
- Isibonelo esikhulu kunazo zonke uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo futhi olusetshenzisiwe olutholwe yinkampani ngokusobala (engalisiki) elidlula esikhumulweni sobumfihlo bokunqoba. Cha, ngoba wonke umuntu ukhona futhi kubaluleke kakhulu kubo ukuthi bakwazi ukuxhumana nokuxhumana kunokubeka "engozini" ezinye izindlela zokuzama.
- Esinye isibonelo esigqamile lolu hlelo lokusebenza oluye lwathandwa kakhulu ngobusuku obubodwa, lolo lokuguga ngezihlungi, okutholakale ukuqoqa nokwabelana ngenani elikhulu lolwazi lomsebenzisi oluyimfihlo nabantu besithathu. Ngabe ukhona omemezile esibhakabhakeni?
Ziyizibonelo ezimbili zabaningi ...
Lapho othile ekhuluma ngobumfihlo yize kukhona - noma kufanele - kunikeze umuzwa wokuthi bayashumayela ehlane ... kepha noma kunjalo, kufanele uvume ukuthi uyiLinux Post Install enesibindi.
Njengenjwayelo, ngiyabonga ngokuphawula kwakho okunembile nokubalulekile ezindabeni ezishicilelwe, futhi njengoba usho ukuthi "kule nkinga ebucayi" kuwo wonke umuntu.
isidleke se-elekthronikhi kusho
Sanibonani okuthunyelwe okuhle kakhulu ngikuthandile futhi ngabelana ngakho
Phendula esidlekeni se-elekthronikhi
Sanibonani Inyosi Yezinyosi! Siyabonga ngokuphawula kwakho okuhle. Lokho kungenye ye-4 engiyenzile ngaleyo ndaba.
Inguqulo entsha ebilindelwe isikhathi eside yeBlender 2.80 isivele ikhishiwe
I-Fail2Ban inketho enhle kakhulu yokuqeda ukuhlaselwa ngamandla kwiseva yakho